China Enwere Ike Ike 240w China Manufacturers & Suppliers & Factory
Enwere Ike Ike 240w - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Enwere Ike Ike 240w)
duru chaa chaa chaa ike 240W
duru chaa chaa chaa ike 240W MGBE EBE ECHICHE: Bbier na- eduzi ebe a na- akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 700W HPS / MH nnọchi. OWU OTU: Bbier na- eduzi ogwe osisi dị mma maka nchịkọta ọkpụkpụ dị mma maka afọ 50,000 nke ndụ. MGBE A GA-EKWU: Bbier Led shoebox Light na-abịa...
30W Anyanwụ nwere ike kwadoro oghere ìhè 5000K
Ogologo Osimiri Uhie Na-enwu Ogologo 30W bụ ezigbo ihe ngwọta maka mkpa nchekwa nchekwa dịpụrụ adịpụ. Nke a 30W anyanwụ a kwadobere ya na-ewu na batrị lithium na usoro nkwụghachi na-enye ọnọdụ siri ike, na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile. Igwe na-acha ọkụ anyanwụ Amazon nwere igwe-ehihie na abalị na ụda ihe nkiri nke...
240W Led Street Light with Pole 31200LM
240W Led Street Light with Pole is 31200lm na 240W Led Street Light Amazon nwere ike dochie HPS / HID 800 watt . Ọnụ ego nke Led Street Light Cost dị nnọọ asọmpi na nke a mere ka a na-eji obere ọnụ ala n'okporo ámá mee ihe maka ebe ndị na-adọba ụgbọala, n'okporo ámá, ụlọ egwuregwu basketball, ebe egwuregwu....
25W anyanwụ nke nwere ike ime ka ìhè dị ọkụ
Nke a na-eme ka anyanwụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ . Anyanwụ na-enwu n'èzí n'èzí dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a pụrụ iche n'èzí n'ìhè ejiri ya na SMD LED nke nyere 3750 Lumens na njuputa zuru ezu. Nke a pụrụ iche nke anyanwụ...
25W anyanwụ nwere ike ịbanye na ya
Nke a nile na- ekpo ọkụ nke anyanwụ na-ekpo ọkụ Ezubere iji rịgoro n'elu ogige dị. Ìhè Mgba Igwe dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Nke a dịpụrụ adịpụ Street Light na -adabere na SMD LEDs nke na-enye 3750 Lumens na njuputa zuru ezu mode. Nke a dị iche iche na-...
Ihe ngbachapu DLC maka ihe ndozi maka HID Fixtures 240W
Bbier 240W Akpa Ngwongwo Azụ maka HID Ngwa bụ obere ike oriri na mfe iji wụnye. Ndị a na-eji ihe mpempe akwụkwọ a na- echekwa ihe karịrị 80% na ọkụ eletrik ma e jiri ya tụnyere mgbanaka dị elu nke sodium na ọla ọkụ. A na-eji kits anyị DLC Led Retrofit eme ihe n'ọtụtụ ebe, Ogige Tennis, Canopy gas station,...
slipfitter 5000K ada shoebox pole ìhè 240W
Ịchekwa ọrụ ike na: Bbier photocell duru Street Light nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 700W HPS / MH nnọchi. MGBE OGE OGE: Bbier na- eduzi chaa chaa chaa 240W e gosipụtara ọkpụkpụ nhazi nke ọma maka awa 50,000 nke ndụ. NTỤKWU NDỊ NA-EME: Bbier Led parking lot Light na-abịa site na nkedo na-adaba...
Nke a 240w n'èzí n'èzí na- enye ihe kachasị mpepụta nke 31200lm na 5000K White Light. Nke ahụ bụ nnukwu ọkụ arụmọrụ nke 130 LM / W! Anyị 240w Street Light Fitting bụ ngbanwe zuru oke maka ọkụ 800W HID / HPS site na iri 240W, belata 67% nke ụgwọ eletrik gị tụnyere omenala Street Light Lamps . DLC &...
Enwere Ike Ike 240w Enwere Ike Ike 240W Enwere ike ịgbanwu Enwere ike ịgbanwu 100W Enwere ike ịgbanwu ọkụ 150w Enwere ọkụ ọkụ ala 120V Enwere Oké Osimiri Ukwu Egwuregwu nke Oge Oge